Ciidamada xoogga dalka oo bur buriyay fariisimo ay argagixisadu ku lahayd Gobolka Shabeelah Hoose. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada xoogga dalka oo bur buriyay fariisimo ay argagixisadu ku lahayd Gobolka...
Ciidamada xoogga dalka oo bur buriyay fariisimo ay argagixisadu ku lahayd Gobolka Shabeelah Hoose.
Howlgalkaan oo ahaa mid qorshaysan oo ciidamadu ku qaadeen goob ay isku soo abaabuljireen maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa waxa u ka dhacay deegaanka Leego oo qiyaastii 44km dhanka woqooyi kaga beegan dagmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose.
Weerarkaan waxa si wada jira u fuliyey ururka 4aad ee guutada 16 aad ee kumandooska Danab iyo Ururka 64aad ee Guutada 7aad Qaybta 60aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana lagu burburiyay fariisimo dhowr ah oo ay maleeshiyada lacago baad ah kaga qaadan jireen dadka shacabka ah ee ku nool deegaankaasi iyo gaadiidka dadweynaha ee isticmaala waddada.
Intii uu Howlgalka ciidanka socday waxa ay gacanta ku dhigeen mootooyin ay Nabadiidka Al-Shabaab u isticmaali jireen miinoyinka sida uu kusoo waramayo Wariyaha Idaacadda codka Ciidamada Qalabka sida Maxamed Cabdulaahi Shilaawe oo howlgalka qeyb ka ah.
Ciidamada ayaa markii ay burburiyeen fariisimahaasi waxa ay bilaabeen baaritaanno joogto ah oo lagu xasilinayo ammaanka Degmooyinka iyo Deegaanada ka tirsan Gobolka Shabeellada Hoose, isla markaana ay baadi goob ku hayaan xubno ka tirsan Kooxda Al-Shabaab.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ayaa wada howlgallo kala duwan oo lagu cirib tirayo kooxda nabadiidka Al-Shabaab oo deegaanno iyo degmooyin faro ku tiris ah kaga dhuumaaleysanaya gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo saxiixay shuruuc muhiim ah oo uu Barlamaanka Galmudug meelmariyey.
Next articleDab geystay burbur hanta oo ka dhacay xaafad ka tirsan Muqdisho.